Madaxweynaha Galmudug oo qaliin wadnaha loogu sameeyay Hindiya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Galmudug oo qaliin wadnaha loogu sameeyay Hindiya
July 18, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed.
New Delhi-(Puntland Mirror) Madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa isbiyaal ku yaala magaalada New Delhi ee caasimada dalka Hindiya waxaa loogu sameeyay qaliin dhanka wadnaha ah, sida ay sheegeen eheladiisu.
Madaxweynaha Galmudug ayaa asbuucii hore dalkaas gaaray si loogu sameeyo baaritaan caafimaad, kadib xanuun kaga soo booday wadnaha.
Qaar kamid ah ehelada Cabdikariim Xuseen Guuleed oo la hadlay idaacada Radio Dalsan oo Muqdisho ku taala ayaa sheegay inuu hadda caafimaad qabo laguna guulaystay qaliin looga sameeyay wadnaha, xaaladiisuna ay soo hagaagayso.
4-tii, Juulay ee sanadkii 2015-ka ayaa Cabdikariim Xuseen Guuleed loo doortay Madaxweynaha maamulka Galmudug oo ka taliya magaalada Cadaado.
August 7, 2016 Wasiirka arrimaha gudaha DFS oo sheegay kahor doorashada dalka in lasoo gabagabayn doono dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shebeellaha Dhexe
May 8, 2017 Qarax gaari oo ugu yaraan shan qof ku dilay gudaha Muqdisho
Hargeysa-(Puntland Mirror) Tirinta codadka ayaa ka socota Somaliland kadib markii shalay oo Isniin ahayd ay qabsoontay doorashada madaxtinimada. Saddex musharax ayaa u tartamaya in ay badalaan madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud “Siilaanyo”, oo xafiiska qabtay sanadkii [...]